ဝဟေငျကနရေိုကျကူးရေးလုပျပွီးမှ မွငျကှငျးထဲဆေးခွောကျပငျတှလေို့အဖမျးခံရတဲ့ အဖွဈ
ဝဟေငျကနေ ရိုကျကူးရေးလုပျပွီးမှ မွငျကှငျးထဲ ဆေးခွောကျပငျတှလေို့ အဖမျးခံရတဲ့ အဖွဈ
စပိနျနိုငျငံမှာ ၃ပတျအကွာ ကငျြးပပွုလုပျတဲ့ VueltaaEspana လို့ အမညျရ စကျဘီးစီးပွိုငျပှဲ ကို ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးက ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီပွိုငျပှဲ ကငျြးပခြိနျမှာတော့ မှတျတမျးတငျရိုကျကူးရေးတှေ ပွုလုပျခဲ့ပွီး ဝဟေငျပျေါကနလေညျး ရဟတျယာဉျနဲ့ ရိုကျကူးရေးတှေ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို ဝဟေငျကနေ ရိုကျကူးရေးပွုလုပျခြိနျမှာတော့ အမှတျမထငျ အဖွဈအပကျြတဈခုနဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။
အဆိုပါ ရိုကျကူးရေး ပွီးစီးတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ဗီဒီယိုဖိုငျကို ပွီးခဲ့တဲ့ စနနေကေ့ လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ post တငျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဝဟေငျက ရိုကျကူးထားတဲ့ မွငျကှငျးထဲမှာတော့ တိုကျပျေါမှာ ဆေးခွောကျလို့ ယူဆရတဲ့ အပငျတှကေို တှရေ့တယျလို့ မကျြစိလငျြတဲ့ ကွညျ့ရှု့သူတှကေ မှတျခကျြတှပေေးခဲ့ကွပါတယျ။ အဆိုပါ ဆေးခွောကျပငျတှဟော ဘာစီလိုနာ အနောကျမွောကျဘကျ Lgualada တိုကျ ခေါငျးမိုးပျေါတှမှော စိုကျပြိုးထားတာဖွဈပါတယျ။
ဒသေဆိုငျရာ ရဲတှဟော လူမှုကှနျယကျပျေါကတဈဆငျ့ သတငျးကွားသိခဲ့ရတာကွောငျ့ အဆိုပါ နရောကို သှားရောကျစဈဆေးတဲ့အခါမှာတော့ ဆေးခွောကျအပငျ ၄၀ကို သိမျးဆညျးရမိပါတယျ။ စိုကျခငျးကို ၂နရော ခှဲစိုကျထားပွီး လကျရှိမှာတော့ အပငျတှနေဲ့ပတျသတျပွီး တရားခံ ဘယျသူဘယျဝါဆိုတာ တိတိကကြ မသိရသေးတဲ့အပွငျ ဖမျးစီးအရေးယူမှုတှေ မပွုလုပျရသေးဘူးလို့ သိရပါတယျ။
? ? El helicóptero de #LaVuelta19 descubre una plantación de marihuana en una azotea. pic.twitter.com/Zhry3x1rng
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာတော့ စီးပှားဖွဈဖွနျ့ဖွူးရောငျးခတြာမြိုးမဟုတျဘဲ တဈကိုယျရညျတဈကာယ သုံးစှဲဖို့အတှကျ ဆေးခွောကျစိုကျပြိုးတာမြိုးကို အရေးယူတားဆီးနိုငျတဲ့ ဥပဒေ စပိနျနိုငျငံမှာ မရှိသေးတဲ့အတှကျပါပဲ။ လကျရှိမှာတော့ အဆိုပါ အဆောကျအဦးနဲ့ ပတျသကျသူ အားလုံးကို အမြားပွညျသူတှသေိသာ မွငျသာ ရှိစရေနျအတှကျ ပေါငျ ၂၇၀၀၀ ဒဏျကွေးတပျဖို့ ရှိကွောငျး ကွညောထားပါတယျ။
ဝေဟင်ကနေ ရိုက်ကူးရေးလုပ်ပြီးမှ မြင်ကွင်းထဲ ဆေးခြောက်ပင်တွေ့လို့ အဖမ်းခံရတဲ့ အဖြစ်
စပိန်နိုင်ငံမှာ ၃ပတ်အကြာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ VueltaaEspana လို့ အမည်ရ စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲ ကျင်းပချိန်မှာတော့ မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးရေးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဝေဟင်ပေါ်ကနေလည်း ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ရိုက်ကူးရေးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဝေဟင်ကနေ ရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်ချိန်မှာတော့ အမှတ်မထင် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ ရိုက်ကူးရေး ပြီးစီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ post တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဝေဟင်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ မြင်ကွင်းထဲမှာတော့ တိုက်ပေါ်မှာ ဆေးခြောက်လို့ ယူဆရတဲ့ အပင်တွေကို တွေ့ရတယ်လို့ မျက်စိလျင်တဲ့ ကြည့်ရှု့သူတွေက မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ဆေးခြောက်ပင်တွေဟာ ဘာစီလိုနာ အနောက်မြောက်ဘက် Lgualada တိုက် ခေါင်းမိုးပေါ်တွေမှာ စိုက်ပျိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသဆိုင်ရာ ရဲတွေဟာ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကတစ်ဆင့် သတင်းကြားသိခဲ့ရတာကြောင့် အဆိုပါ နေရာကို သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ ဆေးခြောက်အပင် ၄၀ကို သိမ်းဆည်းရမိပါတယ်။ စိုက်ခင်းကို ၂နေရာ ခွဲစိုက်ထားပြီး လက်ရှိမှာတော့ အပင်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တရားခံ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ တိတိကျကျ မသိရသေးတဲ့အပြင် ဖမ်းစီးအရေးယူမှုတွေ မပြုလုပ်ရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ စီးပွားဖြစ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကာယ သုံးစွဲဖို့အတွက် ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးတာမျိုးကို အရေးယူတားဆီးနိုင်တဲ့ ဥပဒေ စပိန်နိုင်ငံမှာ မရှိသေးတဲ့အတွက်ပါပဲ။ လက်ရှိမှာတော့ အဆိုပါ အဆောက်အဦးနဲ့ ပတ်သက်သူ အားလုံးကို အများပြည်သူတွေသိသာ မြင်သာ ရှိစေရန်အတွက် ပေါင် ၂၇၀၀၀ ဒဏ်ကြေးတပ်ဖို့ ရှိကြောင်း ကြေညာထားပါတယ်။